~ Witch83၏ စိတ်ကူးကမ္ဘာ ~: 2009
Actually the source is unknown to me, i saw it in Phae Myint Book with the title "Anyway". Just sharing with you all. You guys have it already probably.
Update on content: မာသာထရီစာရဲ့ Anyway ပါ။ (25/09/2012) To Continue Reading
Posted by witch83 at 11:07 AM2comments:
အမှတ်တမဲ့ ကိုယ်ပြောဖူးတဲ့ ပြောမိတဲ့စကားတွေထဲမှာ ဆူးလေးတစ်ချောင်းပါခဲ့ရင်
မတော်တဆ အမှတ်တမဲ့ဆူး က အမှတ်တရတွေ ဖြစ်ကုန်မှာဆိုးလို့ပါ။
Posted by witch83 at 1:33 PM2comments:
Posted by witch83 at 4:00 PM No comments:
Posted by witch83 at 6:02 PM No comments:
ရုံးပိတ်ရက်တစ်ရက်မှာ ပီတာလေးတို့ကျောင်းက ရှေးဟောင်းပြတိုက်တစ်ခုကို လေ့လာရေးခရီး ထွက်ခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီနေ့မှာ သူတို့သွားတဲ့ သမိုင်းပြတိုက်မှာ နံရံပေါ်တက်ပြီး ဆေးသုတ်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ပြုတ်ကျပြီး သေသွားတာကို မြင်ခဲ့ကြရတယ်။ နောက်နေ့ အတန်းထဲမှာ ဆရာမက မနေ့က လေ့လာရေးခရီးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကလေးတွေကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ ဘယ်လောက်ရခဲ့လဲဆိုတာကို ပြန်ပြီးဆွေးနွေးရင်း မနေ့က မတော်တဆမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကလေးတွေအမြင်ကို သိချင်လို့ မေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်။
ဆရာမ။ ။ “တပည့်တို့ကို မနေ့က မတော်တဆမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းလေမေးချင်တယ် .....ကိုလတ်ကို ပထမဦးဆုံးမေးချင်တယ်။ ကိုလတ် မနေ့ကမတော်တဆမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုမြင်သလဲ။”
ကိုလတ်။ ။ "ဆေးသုတ်တဲ့လူက နမော်နမဲ့ဖြစ်လို့ ပြုတ်ကျတယ်လို့ထင်ပါတယ် ဆရာမ။"
ဆရာမ။ ။ “အေးမှန်တယ်ကွဲ့ သားတို့သမီးတို့လဲ နမော်နမဲ့ မနေကျနဲ့ကွဲ့ ....ဟုတ်ပြီလား။”
ဆရာမကဆက်ပြီး “မောင်မောင်ရဲ့အမြင်ကိုလဲ ပြောပါဦး။”
မောင်မောင်။ ။ “အရက်မူးတယ်လို့ထင်ပါတယ် ဆရာမ။”
ဒါနဲ့ ဆရာမက “အေးမှန်တယ်ကွဲ့ သားတို့သမီးတို့ကြီးလာရင် အရက်သေစာ မသောက်စားကြနဲ့ ဟုတ်ပြီလား”ဟု ပြောလိုက်တယ်။
ဆရာမကဆက်ပြီး ပီတာလေးကို မေးလိုက်တယ်။ “ပီတာလေးရဲ့ အမြင်ကိုလဲပြောပါဦး”
ပီတာလေး။ ။ “ကျွန်တော့်အမေကိုဆဲလို့ပါ ဆရာမ။” လို့ ဖြေလိုက်တယ်။
ဆရာမလည်း အံ့အားသင့်သွားပြီး “ဘယ်လိုပတ်သက်လို့တုန်းကွဲ့ ”လို့ ပီတာလေးကိုမေးလိုက်တဲ့အခါ ပီတာလေးက
“အဲဒီလူကြီးက...အေဘေးလေးအောက်ကနေ လှေခါးလာမလှုပ်နဲ့”လို့ပြောလို့ပါဆရာမလို့ ပြန်ဖြေသတဲ့ကွယ်။ ။
Posted by witch83 at 12:20 PM No comments:
ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ဧ။် 1st batch မှ 15th batch အထိ ကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများဧ။် တတိယအကြိမ်မြောက် အာစရိယပူဇော်ပွဲကို ဇူလိုင်လတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါ၍ အလှူငွေများ ထည့်ဝင် လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
ကင်းကောင် ၊ မျောက်ဝံ ၊ အော်ရင်အူတန် (လူ့ဦးနှောက်နီးပါး ရှိသောမျောက်)၊ မျောက်ငယ် ....
သူတို့တွေက အဲဒီအပင်မှ ငှက်ပျောသီးကို အမြန်ဆုံး ဘယ်သူခူးနိုင်မလဲလို့ ယှဉ်ပြိုင်ကြတယ် ..သင်ကောဘယ်လိုထင်လဲ .. ဘယ်မျောက်က အနိုင်ရမလဲဆိုတာ ..သေချာ စဉ်စားပြီး seconds 30 အတွင်း ဖြေကြည့်နော် ....
ကဲ..အောက်မှာ အဖြေကို ကြည့်လိုက်နော် ... = )
သင့်အဖြေက ...အော်ရင်အူတန် ဆိုရင် = သင်စိတ်ဖိစီးမှု တွေရှိနေပြီ ..
မျောက်ဝံ ဆိုရင် = သင်အနားယူဖို့ လိုအပ်နေပြီ ...
မျောက်ငယ် ဆိုရင် တော်တော်ကြီးကို မှားနေပြီ .. စိတ်ရောဂါကုဆေးရုံသွားသင့်ပြီနဲ့တူတယ် ...
ကင်းကောင် ဆိုရင် သင် တစ်နှစ်လောက် ကောင်းကောင်း အနားယူသင့်ပြီ ...
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ .... အုန်းပင်ပါဆိုမှ ဘယ်ကဌက်ပျောသီးက ရှိရမှာလဲ ...
Posted by witch83 at 11:13 AM3comments:
အကြိုက်ဆုံးအချက်ကတော့ နံပါတ် (၂) နဲ့ (၃) ပါ။ ကျွန်မလည်း အဲလိုမျိူးဖြစ်အောင် ကြိုးစားလိုက်ပါဦးမယ်။ :P To Continue Reading
Posted by witch83 at 12:11 PM2comments:
Posted by witch83 at 3:26 PM No comments:
Posted by witch83 at 3:46 PM No comments:
၁။အနန္တငါးပါး၊ဦးထိပ်ထား၊ ညွတ်တွားပါကွဲ့မမေ့နဲ့။
၂။ဆရာမိဘ၊ဆိုဆုံးမ၊ လိုက်နာကြကွဲ့ မမေ့နဲ့။
၃။မိဦးဖဦး၊ဆရာဦး၊ ခူး၍နော်ကွဲ့ မစားနဲ့။
၆။ယဉ်ကျေးအောင်သွား၊ ယဉ်ကျေးအောင်စား၊ စကားပြောလဲယဉ်စေကွဲ့ ။
၇။ပရမ်းပတာ၊သူ့ ထက်ငါ၊ လုယက်ကာကွဲ့မစားနဲ့။
၈။ထမင်းစားရာ၊အစားစာ၊ များစွာစကားမပြောနဲ့ ။
၉။ငြိမ်သက်သားနား၊သတိထား၊ ကောင်းကောင်းစားကွဲ့ကောင်းကောင်းတဲ့။
၁၀။စားပြီးသောခါ၊ စင်ကြယ်စွာ၊ ဆေးကြောပါကွဲ့ ကောင်းကောင်းတဲ့။
၁၁။လက်ကိုလျက်ကာ၊မစားရာ၊ ရှောင်ရှားပါကွဲ့ကောင်းကောင်းတဲ့။
၁၂။နှုတ်ခမ်းပါးနား၊လျက်ကာစား၊ ရှောင်ရှားပါကွဲ့ကောင်းကောင်းတဲ့။
၁၃။လျှာကိုထုတ်ကာ၊မစားရာ၊ ရှောင်ရှားပါကွဲ့ကောင်းကောင်းတဲ့။
၁၆။အိမ်ပေါ်၊ကျောင်းပေါ်၊ဇရပ်ပေါ်၊ သွားသော်ခြေနင်း မပြင်းနဲ့။
၁၇။ရဟန်းသံဃာ ရှေ့မှောက်မှာ၊ ရိုသေစွာတဲ့ သွားပါကွဲ့ ။
၁၈။လူကြီးသူမ၊ရှေ့သို့ကျ၊ ကုန်းကွ၍တဲ့သွားပါကွဲ့ ။
၁၉။ဒူးထောင်ပေါင်ကား၊ ဆရာနား(မိဘနား) ၊ အလျားမှောက်၍မနေနဲ့။
၂၀။အိပ်ရာ၊နေရာ အိပ်ပြီးခါ၊ သိမ်းကြပါကွဲ့ကောင်းကောင်းတဲ့။
၂၁။သောက်ရေ၊သုံးရေ၊မရှိချေ၊ ရေကိုခပ်ကွဲ့မပျင်းနဲ့။
၂၂။ကျောင်းတွင်း အိမ်တွင်း၊ ရှုပ်နေလျင်း၊ သန့်ရှုင်းအောင်တဲ့ ပြုပါကွဲ့ ။
၂၃။မိန်းကလေးမှာ အရာရာ၊ ပျာယီးပျာယာမရှုပ်နဲ့။
၂၄။ မိန်းမ၊မင်း၊ဆင်၊ရဟန်းပင် က္ကနြေ္ဒ့ရှင်ကွဲ့ မှတ်လေဟဲ့။
၂၅။မိန်းမက္ကနြေ္ဒ သိရ်သရေ၊စိန်ကုဋ္ဋေတန်သကွဲ့မှတ်လေဟဲ့။
၂၆။ကျောင်းပစ္စည်းကို မယူလို၊ မြွေဆိပ်လိုကွဲ့ကြောက်ပါကွဲ့ ။
၂၇။မျက်မှောက်တသွယ်၊ မျက်ကွယ်တခြား၊ အကျင့်မှား၊ ရှောင်ရှားပါကွဲ့ကောင်းကောင်းတဲ့။
၂၈။ဝေယျာဝစ္စာ၊ကျောင်းအိမ်မှာ ၊ လျော်စွာလုပ်ကွဲ့မခိုနဲ့။
၂၉။ဧည့်သည် အာန္တု၊ရောက်လာမှု၊ ဆူ၍ညံကာ မနေနဲ့။
၃၀။လူရှပ်၊လူပွေ၊လူယုတ်တွေ၊ ရှောင်ရှားလေတဲ့ ဝေးဝေးတဲ့။
၃၁။ဘိန်းအရက်ကို မရှုလို၊ မစင်လိုတဲ့ရွံပါကွဲ့ ။
၃၂။အများပိုင်ကို၊ကိုယ့်ဟာလို၊ ရိုသေကြကွဲ့ကောင်းကောင်းတဲ့။
၃၄။ ဘုရားပုထိုး၊ဦးညွှတ်ကျိုး၊ ရှိခိုးအိပ်ကွဲ့မမေ့နဲ့။
၃၅။မိခင်၊ဖခင် ဆရာရှင်၊ နေ့စဉ်မမေ့နဲ့ရှိခိုးကွဲ့ ။
၃၆။သူကပြုဖူး၊သူ့ ကျေးဇူး၊ အထူးမမေ့နဲ့၊ ပြန်ဆပ်ကွဲ့ ။
ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှု သင်ခန်းစာ စာအုပ်မှပြဌာန်းသည်။
Labels: Dhamma, Share, ဗဟုသုတ